Mashiinka Jilicsan ee Sunta Cunnooyinka Isugeynaya Wasakhda Waxsoosaarka ee Sidiyeyaasha Nidaamka Kaydinta Haydarooliga iyo Warshad | YiZheng
Ku Mashiinka Mashiinka Daarmayaashiisa Lagu Daahfurayo wuxuu leeyahay faa'iidooyinka waxtarka sare, isku dhafka labiska, leexashada qoto dheer iyo masaafada dheer ee dhaqaaqa, iwm .Waxaa lagu waafajin karaa qalabka wareejinta-wareejinta si loo xaqiijiyo leexashada godadka badan.
Waa maxay Mashiinka Mashiinka lagu beddelo Nalalka Maskaxda?
Ku Mashiinka Mashiinka Daarmayaashiisa Lagu Daahfurayo wuxuu leeyahay naqshad macquul ah, isticmaalka tamarta oo yar ee mootada, sooceliyaha qalabka wejiga adag ee soo-gudbinta, qaylada hoose iyo waxtarka sare. Qaybaha muhiimka ah sida: Silsilad adeegsaneysa qaybo tayo sare leh oo waara. Nidaamka Haydarooliga waxaa loo isticmaalaa qaadista iyo hoos u dhaca, iyo qoto dheer wareegga ayaa gaari kara 1.8-3 mitir. Qalabka dhererkiisa toosan wuxuu gaari karaa 2 mitir, wuxuu ku sii jirayaa hawada muddo dheer, la'aanteed, noocyada kale ee qashin qubka waxay sameyn karaan seddex taangiyada halsano, iyagoo adeegsanayaMashiinka Mashiinka Daarmayaashiisa Lagu Daahfurayo, mid ayaa ku filan.
Muxuu yahay Mashiinka Mashiinka Daabacaa Cagajiyeyaasha Saxan ee loo isticmaalo？
1. Isticmaalka silsiladda wadista, wareejinta taageerada qaabdhismeedka sariirta, iska caabbinta caabbinta si loo keydiyo tamarta, oo ku habboon qalliinka jeexdin qoto dheer.
2. Sariirtaada isdabamarinta waxay ku qalabeysan tahay xiisad jilicsan iyo hawo qoyan oo laastik ah si loo ilaaliyo nidaamka wadista iyo qeybaha shaqada iyo howlgalka hufan.
3. Sariirta isdaba-marinta waxay ku qalabeysan tahay galka iligga qaloocsan ee giraanta u adkeysanaya, kartida burburinaysa, saamaynta oksijiinta wax-qabadka.
4. Maaddadu waxay ku sii jirtaa sariirtaada muddo dheer, kala firidhsan tahay sare, iyo xiriir hawadeed oo ay la socdaan roobab fudud oo buuxa.
5. Barakaca toosan iyo kan toosanba waxaa lagu gaari karaa meel kasta oo ka mid ah qalliinka foorarka, dhaqdhaqaaqa rogrogmi kara.
6. Qaybta wiishku waxay isticmaashaa nidaamka xakamaynta haydarka, shaqada dabacsan, aamin ah oo hufan.
7. Kontaroolka fog ee diyaaradda oo horay loo sii wado, wareejin jiif ah, is rogrog iyo dhabarka dambe iyo howlaha kale ee lagu hagaajinayo jawiga howlgalka.
8. Cunto-siiyaha wax lagu doorto ee naadiga ah, aaladda dheecaanka otomaatiga ah, qolka halsano qorraxda iyo nidaamka hawo-qaadashada.
9. Wuxuu isku daraa shaqooyinka wax soo rogida, nidaaminta daaqa, bixinta oksijiinta, iyo wareejinta walaxda.
10. Nidaamka xakamaynta otomaatiga ah ee leh beddelka amniga iyo kontoroolka fog.
11. Ku qalabaysan aalad kala wareejin ah waxay xaqiijin kartaa mashiinka qaniinyada hawl-qabad badan, oo badbaadinaya maal-gashiga.
Mashiinka Shaqeynta Mashiinka Mashiinka Mashiinka Lagu Daro
Nidaamka socda ee Mashiinka Mashiinka Daarmayaashiisa Lagu Daahfurayo waxay qaadataa sharciyeynta xawaaraha soo noqnoqda ee isbeddelaya, taas oo leh la-qabsi wanaagsan oo loogu talagalay qalabyada kala duwan, orodka deggan, waxtarka sarreeya ee sarreeya iyo qalliinka qoto dheer. Waxay gaabin kartaa xilliga halsano waxayna hagaajin kartaa wax soo saarka wax soo saarka iyo tayada wax soo saarka. Isticmaalidda nidaamka socodka xawaaraha isdabajoogga, waxay si fiican ula qabsan kartaa isbeddelada culeyska shaqada.
Xulashada Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Lagu Daro
Baaxadda saxanka silsiladda
Baaxadda taangiga halsanda
Dhererka taangiga halsano
Awoodda leexashada ugu badan
Barakac qalab ah oo leexasho kasta leh
Dhererka qaadista ugu badan
Hore: Noocyada 'Groove Type Composting Turner'
Xiga: Nooca Crawler Guudmarka Mashiinka Isku-darka Wasakhda Qashinka